Asizakale, Lots futhi Margin - Online Forex EA sika | Expert Advisors | FX Robots
IkhayaForex SchoolAsizakale, Lots futhi Margin
Thola limelela isilinganiso wekhasi Ukuhweba, futhi ngo forex lokhu kungaba eliphezulu kakhulu, ngezinye izikhathi okuningi njengoba 400: 1, okusho ukuthi idiphozi ohlangothini nje $ 1000 Into ezazingakwazi ukuyilawula usayizi isikhundla $ 400,000.
Uma unikwa 100: 1 akhawunti asizakale Brokerage, futhi waba yini akhawunti mini nge $ 1000 (1000 units), ungase ufake $ 100 (100 units) ngale ndaba emakethe on wekhasi futhi ukudayisa $ 10,000 (10,000) iyunithi isikhundla. Ngoba wonke $ 1 ayifake kwemakethe wekhasi broker yakho ingesinye $ 99 ukuze alenze $ 100. Lokhu kusho ukuthi ungakwazi ukudayisa inkatho mini kuwufanele $ 10,000 usebenzisa i-akhawunti uxhaswe kuphela $ 100 noma ngaphezulu.
Thola 1: 100 ivumela iklayenti sibekezelele 1 okuyingxenye for ngayinye 100 ukuhweba: esibonelweni esingenhla, iklayenti kunomthelela $ 100 nakubo bonke abanye ($ 9,900) livela broker.
Qaphela: Broker asizakale akashintshi ukubaluleka lot!
Thola akuphazamisi ukubaluleka lot: a lot mini kuyinto 10,000 amayunithi futhi eziningi standard 100,000 amayunithi, kungakhathaliseki asizakale. Kunalokho, asizakale kuba nethonya isibalo inkatho ungaba emakethe, esekelwe capital ku-akhawunti yakho.
Ngokungafani izimakethe stock lapho udinga idiphozi egcwele lemali adayiswa, lo Forex imakethe idinga kuphela i-deposit deposit. Yonke imali izokwenziwa yi-broker yakho (uzoyiboleka kumthengisi wakho). Amasheya angakuvumela ukuba ukhokhelwe kumthengisi wakho kumanothi kuya, kepha kuphela nge-2: 1 ukuphakamisa, futhi ikusasa linganikeza amandla amakhulu (kuze kube yi-30: 1) kodwa ngobukhulu obunqunyiwe bekhontrakthi obunciphisa kakhulu ukuguquguquka.
Forex, ngokuphambene, ivumela kungenzeka ukusebenzisa asizakale xaxa (kufika ku 400: 1) ne ibhonasi wanezela usebenzisa obuhlukahlukene lot osayizi. Konke ukusetshenziswa ungentiwa nge standard, mini, micro noma ngezinye izikhathi njengoba low nano noma usayizi penny. usayizi ngasinye okuningi ebangela ngesilinganiso ezahlukene amayunithi base lwemali, nakho presents i-PP value ehlukile. Ngezansi: eshadini lelilula ukukhombisa umehluko lot osayizi, kulinganiswa amayunithi, ivolumu ngababili ezinkulu lapho lwemali base kuba USD (ex. EURUSD noma GBPUSD).
1 Standard uLoti 100,000 amayunithi 1.0 1 PIP = $ 10
1 Mini uLoti 10,000 amayunithi 0.1 1 PIP = $ 1
1 Micro uLoti 1,000 amayunithi 0.01 1 PIP = $ 0.10
1 Nano uLoti 100 amayunithi 0.001 1 PIP = $ 0.01
Ngoba izibalo ezinembile kakhudlwana PIP value, okuyinto ziyahlukahluka uma base akuyona USD, ungasebenzisa i-inthanethi-PP wokubala.
Manje, lokho uthola ezithakazelisayo oluhambisana kwalesi anhlobonhlobo lot osayizi ne anhlobonhlobo asizakale.
Leli thebula elingezansi ibonisa asizakale, amaphesenti wekhasi kwakudingeka ukuvula up isabelo esisodwa, futhi kwaphumela dollar lemali edingekayo ukuvula eziningi eyodwa (standard, mini, micro nano):
Thola / Margin Izidingo Itafula Various uLoti Sizes
% Of wekhasi ezidingekayo
ukuvula 1 okuningi
$ Imali enikelwa
Kuyadingeka 1 standard
Kuyadingeka 1 mini
Inani lemali (iMargin)
Kuyadingeka 1 micro
$ Inani (Margin)
Kuyadingeka 1 Nano
Ungabona kusukela ishadi ngenhla ukuthi nge 100: 1 broker leveraged wena kuphela edingekayo ukuze sibekezelele $ 10 for ngamunye ($ 1000) lot micro. Lokhu kusho ukuthi uma kwakudingeka nje $ 200 ku-akhawunti yakho, ubungeke ube umthamo ukudayisa up kuze 20 micro okuningi izikhundla, uma kunjalo ufisa.
Kodwa Musa sibe abahahayo!
It is hhayi Kunconywa you hweba ngisho 10% of esabelwe wekhasi ratio yakho oyedwa noma ekuhlanganisweni lot izikhundla. Smart asizakale, njengoba sizobona, kakhudlwana imizila 2: 1 asizakale, noma 2% of wekhasi yakho free.
Ngokwesibonelo, ukube akhawunti micro $ 1000, at 100: 1 asizakale, kungaba kuhle uma you hweba inkatho 2 kuphela micro (2: 1 asizakale, noma 2% of wekhasi free). Lokhu kwakuyoba ngikushiye 98% mahhala ( "wekhasi engasebenzanga noma etholakalayo") ukubeka abathengisa yakho. PIP Ngamunye kuzoshintsha akhawunti yakho ngokufaka 20 amasenti (2 eziningi ezincane X 10 amasenti). Ngaphezu kwalokho, cishe akunakwenzeka vele umthetho omuhle engozini engasekho kuka 2% on eyodwa yezohwebo. Ukubeka 100-PP stop ukulahlekelwa 2 yakho micro lot yohwebo kungasho ukuthi ubungeke engozini a maximum of 2% (100X20 amasenti = $ 20, okuyinto 2% of $ 1000). Lokhu kuzakwenza ukuba usinde string ukulahlekelwa, okuyinto ngalesi simo esingokoqobo forex.
Thola kungaba umngane wakho noma isitha, kuye ngokuthi uyisebenzisa kanjani. Thola ufana Ukuhweba ithuluzi omkhulu, okuvumela Abadayisi dolobha engaphansi iqhaza izimakethe abakwazanga ukudayisa ngenye indlela, kodwa njenganoma iyiphi ithuluzi (cabanga Chainsaw), kufanele ufunde indlela yokuyisebenzisa ngendlela efanele noma kungaba usike wena phansi.
Kuyoyithinta kanjani ingozi futhi umvuzo yokukhetha Broker Umnikelo A Higher Thola Than Enye?
Iningi lezihloko ezikhuluma ngokubheka kanye ne-forex zixwayisa ngokumelene nama-brokerage amafemu ahlinzeka ngama-ratios wokulinganisela okukhulu kune-100: 1. Yini ebangela lezi zixwayiso? Ngokuvamile ukubuka okucacile ukuthi iklayenti evamile yokudayisa kuyinto engaziwa ongenalwazi olungamangali ozobe ekhulula amathuba okubheka, uma enikezwa ithuba. Ukusetshenziswa kulolu cala kufana netambo, futhi uma iklayenti inikelwa ngokwanele, uyazibopha phezu kwayo. Uyabona ukuthi i-400 yakhe: Umdayisi we-1 uyomvumela ukuthi athengise amayunithi we-100,000 nge-$ 300 yobukhulu be-akhawunti yakhe, ngakho-ke usebenzisa ngokunenzuzo leso sabelo, ngokungahambisani ne-akhawunti yakhe encane ekufeni okusheshayo.
Uhulumeni wase-US ongapheli ngokweqile (ngendoda yeCFTC) naye ucabanga ukuthi iklayenti evamile ngumuntu ongenalwazi olungamangulu futhi ngakho-ke ku-2010 ithathe isinyathelo ukuvikela umtshalili we-forex ngokumphoqa wonke ama-brokerages ase-US ukuba ahambisane nokuphakama okukhulu kwe-50: I-1, umthetho owaqala ukusebenza ngo-Okthoba 2010. Ukuhlonipha ngokwanele, i CFTC befuna ukunciphisa amandla ku-10: 1 ukuthatha "umgembula" ngaphandle kwe-forex, kodwa ekugcineni wanquma ukuthi i-50: i-1 yayinengqondo kakhulu "futhi inengqondo" futhi ihambisane nesilinganiso seJapan ngokuphathelene ne-forex. Ngaphambi kwe-2010, kwakungenzeka ukuthi abathengisi base-US banganikeza ama-leverages we-100: 1 noma i-200: 1. Akusenjalo. Manje i-US imingcele amandla ku-50: 1 futhi Japan Ukukalela asizakale ku 25: 1, ngesikhathi amanye amazwe amaningi asizakale ephakeme.
Ngokuvamile, ngicabanga ukuthi ukuvimbela ukuhweba kwabathengisi base-US ibhizinisi elibi kakhulu futhi akuncintisanga nalo lonke izwe. Abaningi abathengisa abathengisi base-US sebephelile ukuhambisa ama-akhawunti abo phesheya ukuze bajabulele i-forex ngaphandle kwemingcele eminingi. Ama-Brits noma ama-Aussies noma ama-Swiss ngeke asheshe ukudubula ezinyaweni, uma NGINGAYilandeli i-US angakwazi ukukhiqiza izigidi emholweni owengeziwe. Lokhu kunciphisa kokusetshenziswa kwe-US kungumunye wemikhawulo eminingi (isib. Umthetho wokungahlosi we-hedging), okwenzanga lutho ukusiza abahwebi futhi wenza okungaphezulu ukuvimbela ikhono labo lokuthola okuningi e-US Kuyinto yokuziqhenya, yokuzihlonipha nokuziqhenya kwamanye amazwe engxenyeni yabalawuli bakahulumeni base-US ukuthi bacabange ukuthi i-50: i-1 yokulinganisela "iyanele ngokwanele" ye-forex yesilinganiso abadayisi.
The iqiniso langempela wukuthi okusezingeni Brokerage asizakale futhi ngokwalo ingozi. Ngoba forex asizakale akashintshi ukubaluleka lot, futhi une choice ukudayisa ezahlukene eziningi osayizi, akungenxa ngaphezulu kuyingozi ukuthandana asizakale xaxa, njengoba kuyoba ne ikusasa, lapho ungakwazi ukushintsha usayizi lot. asizakale Higher nje ayinika ikhono ukudayisa eziningi amakhulu (noma okuningi) dolobha kancane. Uma kwakudingeka nje $ 500, Ngokwesibonelo, ungakwazi ukuvula i-akhawunti micro nge 400: 1 asizakale, ukuze ungakwazi ukulawula afinyelela ku 20 inkatho micro kuphela $ 2.5 wekhasi ngayinye. Noma, ungakwazi ukulawula 1 micro eningi nje $ 2.5 wekhasi. Phakathi ubuncane yakho kanye nokusetshenziswa esiphezulu asizakale futhi okuningi sizing kuyinto uhla enkulukazi nezimo.
Ngiyavuma ukuthi kokuba engahle more ukuze asizakale kungaba yingozi for abahwebi abahahayo, kodwa zonke abahahayo abadayisi Kufanele babe nethuba hang ngokwakhe futhi asuse ngokwakhe esigcawini. Uma abahahayo abadayisi has $ 1000 e 400 yakhe: 1 akhawunti micro, futhi ufuna ukusebenzisa esiphezulu asizakale kungenzeka for umsebenzi wakhe, yena angaba ukuvula 3 inkatho standard ngenxa yakhe (nge nesilinganiso esetshenziswa $ 750), kanye ukugembula eya esheshayo ukufa. A encane kakhulu 30 move-PP ngokumelene isikhundla sakhe kungadla kuye $ 900 (10 X $ 10 per-PP X 3 inkatho), futhi ngaleso wayeyoba ngokuzenzakalelayo wamukela ucingo wekhasi ukuthi kwakuyoba nokuqeda inkatho yakhe 3 indinganiso ngesizathu sokuthi wayesike edingekayo ayisekho wekhasi ukuyilawula.
Ngakho, kuyafaneleka ukuthatha isixwayiso wakuphindaphinda: asizakale HIGH kungaholela ukulahlekelwa eningi kakhulu AS IZINZUZO eningi. Yebo, ikakhulukazi eziyizimungulu, abahwebi abahahayo abasebenzisa okuningi kakhulu asizakale atholakale kubo.
Ukuhweba With Less Per yezokuhwebelana Thola Nakuba uligodlela Ilungelo Lokungayi Thola Ephakeme
Ngikholelwa ukuthi asizakale nezimo KANYE eziningi nezimo sizing laniketwe Forex angavumela abahwebi kakhulu ephephile kude yokuhweba enkundleni kuka noma amasheya noma ikusasa. A ikusasa abadayisi kufanele asebenzise asizakale senzelwe inkontileka esibekiwe, okungaba ngempela high futhi iyingozi. A Forex abadayisi, ngokuphambene, kungaba ukudayisa ngokuphepha inkatho futhi asizakale ngokulingana ubukhulu akhawunti yakhe. Ngokwesibonelo, ephephile usayizi starting ukuhweba i-akhawunti emcimbini wokuvulwa $ 1000 Cishe bekungeke kube okuningi micro, okwakuyoholela ngemphumelelo ukuthi usebenzisa zero asizakale. Ngemva kwalokho ngeke kudingeke sikhathazeke mayelana 100-PP ukuhambisa decimating akhawunti yakhe; esikhundleni, 100 Pips ngokumelene naye kuyomane kubiza naye $ 10 (noma 1% of akhawunti yakhe), futhi uzosinda inombolo abathengisa yokulahlekelwa.
Okufanayo abadayisi kungaba khona ukugcina i-200 engaba khona: i-1 yokuphakamisa ukuhlukahluka, ithuba noma ukuphuthumayo. Ake sihambe ngaphezu kwesinye. Ngokwehlukahluka, ngisho ukuthi kungenzeka ukuthi kube nokuhweba okufanayo okusebenzisa amasu ahlukene ezimakethe ezahlukene. Mhlawumbe wadala noma uthole ama-EA ahlukene ayisithupha aphumelela emuva futhi aqhubekela phambili ekuhlolweni, futhi ufuna ukukwazi ukudayisa zonke ii-EAs eziyisithupha, usebenzisa i-2% yemali mahhala ngayinye. Ngethuba, ngisho ukuthi kungase kube khona izikhathi emakethe lapho uthola ithuba elimangalisayo futhi ufuna ukulifaka phezu kwalo ngezinga elikhulu noma izikhundla ezingaphezulu. Uma ucabanga ukuthi izinkinga ziyakuthanda kakhulu, kukhona okusemandleni okuwasebenzisa. Unekhono lokushayina okukhulu nokukhuni.
Bese kuba khona amacala nzaka. Senihluphekile uchungechunge omkhulu abathengisa kokulahlekelwa, futhi i-akhawunti yakho phansi $ 500 kusukela kokuqala $ 1000 yayo (50% ukulahlekelwa), kahle ke esimweni esinjalo ungakwazi namanje uqhubeke ukusebenzisa 0.01 okuningi emasayizi ukuze uphume emgodini, kodwa asizakale yakho kuye kwanda Okwesikhashana, ngoba 0.01 usayizi lot ngempumelelo ilawula $ 1000 lapho manje une kuphela $ 500 (wena manje usebenzisa asizakale of 2: 1 abafanele zibhekelele isibalo isibalo samalunga akhawunti yakho). Eqinisweni, ngenxa yokuthi we 200: 1 asizakale abangahle, i-akhawunti yakho ungawela ngezansi $ 100 (90% of kokuqala yakho), futhi ungakwazi namanje ukuthi usebenzisa 0.01 usayizi lot ukuze zizame ukukucindezela ukuba wenze out hole. Ngaleyo ndlela Kukhula asizakale umthamo uvumela ukuba balondoloze esabelweni sakho sokuqala sizing njengoba akhawunti yakho amaconsi. Qhathanisa lokho amasheya, lapho zonke nokwehla iphesenti ku-akhawunti yakho ye-bayophoqa ukuba ukudayisa 100 block Amasheya amancane stock amagugu, okwakuyoholela kube nzima futhi isikhathi eside ukukhuphuka indlela yakho out of draw phansi.
Ekugcineni, Brokerage yakho asizakale inquma asizakale yakho esiphezulu engahle, futhi kuba nesithakazelo sakho best ukudayisa ngezinga kulencane kwalo, igcinelwe ezinye nemidlalo ye diversification, ithuba nobunzima.
Margin, Margin Used And Margin Okutholakalayo
Ekuqaleni kwalesi sihloko ngibonisa ukuthi iklayenti ene-$ 1000 akhawunti (ibhalansi yokuqala) ithengisa i-1 inqwaba ye-EUR / USD, ene-value ye-$ 10,000. Uma umthengi enesisindo se-100: 1 yale akhawunti, ngakho-ke ukuze athengise ukuthi i-1 mini lot uzothatha i-$ 100 kusuka ku-akhawunti yakhe futhi abude $ 9,900 kumthengisi. Imali ayithatha ku-akhawunti yakhe ($ 100) yiyona wekhasi or esetshenziswa wekhasi, Okuyinto isetshenziswa ukuze balondoloze evulekile ukuhweba isikhundla. Kukhona manje $ 900 ku-akhawunti yakhe ukuthi ayenzi adayiswa. Umthamo ukwenza kwenye ukuhweba kunqunywa ohlangothini free okuyinto yokuqasha ngokulingana kusukela ngalo wamanje esetshenziswa wekhasi is sisuswe.
Margin noma Margin ezisetshenzisiwe
Inani lemali ku-akhawunti yakho okwamanje esetshenziselwa ukuhweba okuvulekile. Uma une-100: i-1 brokerage, futhi uvule i-1 lot lot, khona-ke umkhawulo wakho osetshenzisiwe ngu-$ 100. Bheka ithebula elingenhla: Hlola / Ithebula lezimfuneko zeMargin yezintambo ezahlukene zeLot. Ngokuqondile, ifomula kanje:
Margin Used = (Market Quote for pair * Izinkampani) / Thola
(Isibonelo 200: 1 broker ngoba 1 mini eziningi at 1.2700 EURUSD:
Ukuze uvule & nilondoloze trade, uzodinga ukuba okungenani $ 63.50 we ukulingana iyatholakala kwi-akhawunti.
Ezisebenzisekayo noma Khulula Margin:
Kuyinto inani lemali ku-akhawunti yakho lokususa wekhasi (noma esetshenziswa Margin). Uma une $ 1000 ku-akhawunti yakho futhi uke kwavula 1 mini okuningi okudinga ohlangothini $ 100, khona-ke wekhasi yakho free $ 900.
Free Margin = Equity - Margin (noma Margin Used)
(Isibonelo: $ 1000 - $ 100 = $ 900 wekhasi khulula)
Ngezansi skrini MT4 of Margin, Margin Free futhi margin Level (E Terminal Window):
Sesike lokho Margin kuxoxwe ngazo futhi Margin Free kuyinto. In the 400 ngenhla: 1 FXPro akhawunti ye $ 1399, sathatha out okuningi mini ukuthi usebenzisa $ 25 wekhasi. Lokho kushiya $ 1371 wekhasi khulula atholakale kimi for abathengisa ezengeziwe. Ok ke, uyini Margin level (liyini 5504%)?
margin Level Amaphesenti:
Margin Level Amaphesenti = (Equity / Margin) X 100
Ku-skrini engenhla, ukulingana kwami ​​kuyi-$ 1397 ehlukaniswe yi-25 efana ne-55, futhi iphindwe yi-100, nginephesenti yezinga le-5504%. Iyini incazelo yalokhu? Ikunika ukubuka okusheshayo kwezinga lakho lomkhawulo, ikakhulukazi ukuthi usondelene kanjani nokufinyelela ezingeni le-margin ye-100%, izinga elijwayelekile eliye lafinyeleleka kubathengi abaningi lizoholela ekuqedeni kwamakholi we-margin. Masihlubule isithombe esiphezulu:
Free wekhasi: 1371.93
Ngisebenzisa $ 25 wekhasi. Ukuze uthole 100% Margin Call Broker, mina uzothola nesilinganiso ucingo ekuvalweni lapho ukulingana lize liba ngaphansi kwe $ 25 (100% wekhasi level).
Liyini Imajini ucingo?
Kungakhathaliseki Ukuhweba okulula ngamasheya umuntu, ikusasa noma Forex, bonke abadayisi ukwesaba esisabekayo wekhasi ucingo.
I-Margin Call: isixwayiso esivela kumthengisi ukuthi i-akhawunti yakho isuke idlule umkhawulo odingekayo ngo-%, nokuthi akukho ukulingana okwanele (inzuzo ehambayo - ukulahlekelwa okuhambayo + ibhalansi engasetshenzisiwe) ku-akhawunti ukusekela ama-Open trades noma yikuphi okunye.
Kusukela iphuzu broker umbono, kuba nendlela yabo kokuzivikela ekulahlekelweni imali base imvume nge-margin futhi asizakale. Ngo Forex akusiyo ucingo oluvela broker yakho ukuze ungeze izimali ezengeziwe, njengalokhu kunjalo esitokisini futhi ikusasa. Kunalokho, ngokuvamile i ukuvalwa othomathikhi ngokugcwele noma kancane izikhundla yakho uma i-akhawunti lize liba ngaphansi kwe ohlangothini yesondlo (inhlokodolobha edingekayo ukuze uvule isikhundla, isibonelo, $ 1000 eziningi ejwayelekile uma usebenzisa 100: 1). Bheka ithebula elingenhla. Kukhula asizakale esetshenziswa iluphi uhwebo ethile, kulapho ingozi dolobha une engozini, futhi amathuba ngaphezulu ucingo wekhasi.
Kufanele ngokugcwele indlela wekhasi yakho isebenza, futhi uqinisekise ukuthi ufunda isivumelwano wekhasi phakathi kwakho broker yakho. Kuyinto njalo kuwumqondo omuhle ukugcina iso Imajini yakho Isetshenziswa futhi Margin Free ukuqinisekisa ungasebenzisi wekhasi kakhulu nokuthi unempahla eningi khulula ohlangothini lwesobunxele.
Lapho umthengisi uthi: Imajini Call ezingeni = 100%.
Lokhu kusho ukuthi uma izinga leMargin lingu-100%, uzothola ukucaciswa kwekholi ye-margin (mhlawumbe i-imeyili isixwayiso kusengaphambili) uma ukulingana kwakho kufana nomkhawulo wakho osetshenzisiwe, okungukuthi, uma izinga lakho lokungena nge-100%. Ngokushesha ngemuva kokuthi izikhundla zakho zizovalwa (ngokuvamile ngokukodwa, ziqala okungenani kunenzuzo kuze kudingeke imfuno encane ye-margin). Ngenkathi isidingo se-100% semakethe senza ingozi yokubiza ucingo kakhulu, isindisa imali engaphezulu uma ukulahlekelwa okunye kungenakugwema ngokukuvimbela ukulahlekelwa ihembe lakho. Une okungenani imali esele e-akhawuntini ekuhambeni okungekho emakethe okubi kakhulu.
Lapho umthengisi uthi: Imajini Call ezingeni = 50%.
Lokhu nomdayisi nokuba nomusa kakhulu njengoba kuso iphatha kanjani ukuhlukumeza kwakho wekhasi imikhawulo. Sizoqala kuphela liquidating akhawunti yakho uma nokulingana yakho kulingana nengxenye wekhasi yakho esetshenziswa, okungukuthi, lapho margin izinga lakho wehlela 50%.
Lapho umthengisi uthi: Imajini Call ezingeni 70%, ayeke ukuphuma 30%
Lo mthengisi ukhululekile futhi unikeza isixwayiso esihle. Isixwayiso se-margin siqaliswa lapho izinga lakho lokumaketha liyehla ku-70%, futhi ukukhishwa kwezimali kwenzeka uma izinga lakho lokungena ngemvume lihlehlela ku-30%. Ngokuba nezinga lakho lokubiza elide lamaketha kula mazinga aphansi, ingozi yokuba nekholi ye-margin iqhutshelwa phambili (okungaba kuhle uma uhweba ne-grid noma i-martingale systems). Kodwa-ke, uma ungaqapheli ngokwanele, laba abadayisi be-margin abaphanayo abanokuphinda bangakushiya nge-akhawunti yakho uma ngabe imakethe ihamba ngokuqinile ngokumelene nawe.
Ngezansi yisibonelo ucingo wekhasi nge 100% Imajini Call Level Broker.
UJeff uvulela i-akhawunti encane nge $ 1000 ku-100: 1 ukuphakamisa. Uhlaziya i-EUR / USD futhi unquma ukungena, ufaka i-4 inkatho mini nge-EUR / USD ngentengo ye-1.3200. Ngokwesilinganiso semkhawulo ngenhla [(Market Quote * Lots) / Ukusetshenziswa], uJeff uzosebenzisa i-$ 520 margin ((1.3200 * 40000) / 100). Ngaphambi kokungena, i-Jeff's free margin yayingu-$ 1000, futhi ngemva kokungena, umkhawulo wakhe wamahhala u-$ 480 ($ 1000- $ 520) .Izimangalo ze-Isaster kanye namabhizinisi kaJeff amelana naye: EUR / USD ihamba ngamapayipi we-100, futhi kusukela wonke amapayipi Ama-mini angu-4 afana ne-$ 4, ukulingana kwakhe kwehla ku-$ 400 (150X $ 4) ukufinyelela i-$ 600 (1000-400). Manje uJeff ubona lokho margin Level i-115% (Equity / Margin = $ 600 / $ 520), ngokusondelene nezinga lakhe le-margin elingu-100%. Kuleli qophelo ibha ye-margin yakhe ibomvu njengesixwayiso. Uma i EURUSD iqhuma amanye ama-pips e-25, ukulingana kwe-akhawunti yakhe kwehla ku-$ 100 (25X $ 4) ukufinyelela i-$ 500. Manje sesifinyelele ngaphansi kwezinga elingu-100% lama-margin futhi uhlelo luvala ngokuzenzakalelayo amathenda ekulahlekelweni ukuze kutholakale umkhawulo omningi.Uma izinto zisondela ku-100%, izinto eziningana zingenzeka, kuye ngokuthi inqubomgomo yomkhawulo we-broker. Abanye abadayisi bangakwazi ukubeka izikhundla zamanzi ku-100%. kuncike kumgomo we-margin womthengisi, izikhundla zakhe zazingenqunyulwa ngokuphelele noma ingxenye. Njengoba uJeff enenqubomgomo yezinga le-100% yezinga lokushayela nomthengisi wakhe ngenqubo yokwehliswa okuyingxenye, umdayisi wakhe uqala ukuzulazula izikhundla (ngobukhulu bulahlekelwa kuqala) kuze i-akhawunti yakhe ibuyele emuva ngenhla yezinga le-100% yamakholi. Ekuqaleni angase abone ukuthi esinye sezikhundla zakhe ezine sikhishwe ekulahlekelweni kwe-125 pips, ukwehlisa imfuno yakhe ye-margin kuze kufike ku-$ 390 (ye-$ 500 equity), evuselela izinga lakhe lokungena ku-128%.
Kodwa uma imakethe iwela ngamapips engeziwe e-25, uzobona i-akhawunti yakhe ihla nge $ 75 (25x $ 3) ibe yi-$ 375 equity, futhi iphinde imqhube ngaphansi kwezinga le-100%, futhi izophela ukulahlekelwa okwesibili isikhundla ku-150 pips ukulahlekelwa. Lokhu kuzokwehlisela imfuno yakhe ye-margin kuze kube yi-$ 260, futhi nge-equity ye-$ 375, izinga lakhe lomkhawulo lizohlelwa kabusha ku-144%. Mhlawumbe-ke, uma ebona ukuthi ulahlekelwe ngaphezu kwe-60% ye-original yakhe, uJeff uzoyibiza ngokuthi i-quits bese ivala izikhundla ezimbili zokugcina nge -150 pips ukulahlekelwa ngamunye, ngokulahlekelwa okuphelele kwe $ 625.
Jeff Kubi, wasebenzisa asizakale kakhulu futhi ithole yena enkingeni. Kahle kahle, Jeff bekumelwe ngidayisa nge 2 kuphela: 1 asizakale, okufanele ukuba kwakumangalisa 2 eziningi micro for yakhe akhawunti $ 1000 (2 eziningi micro = $ 2000). Khona-ke umuntu 150 hambisa enqabayo ngokumelene naye ngabe kwamlahlekisela kuphela $ 30 (150X $ 0.20), ukulahlekelwa% 3 kuphela akhawunti yakhe. Jeff ngabe uzokwazi ukulwa olunye usuku.
Indlela Gwema Imajini Izingcingo & Stop Outs?
Sebenzisa smart asizakale. Zama hhayi ukudayisa ezingaphezu kuka 2: 1 asizakale nganoma isiphi isikhathi esisodwa.
ofeleba abahlakaniphile. Qiniseka ukuthi banezimali ezanele livule futhi ligcine abathengisa.
Yehlisa izingozi yakho. Zama hhayi ukuba engozini ezingaphezu kuka 3% kwe-akhawunti yakho noma iyiphi noma iyiphi ukuhweba eyodwa.
Indawo eyeka ukuvikela nokulingana yakho kusuka balahlekelwa kakhulu.
Ekugcineni, izingcingo zomkhawulo zingagwenywa ngempumelelo ngokusebenzisa ubuncane kakhulu kunokuba kutholakale ukukala ukuze wenze ukuhweba kwakho nokuqapha ibhalansi ye-akhawunti njalo. Kuye kwaphakanyiswa kaningi ukuthi umuntu kufanele asebenzise ama-stop-oda kuzo zonke izikhundla ukuze akhiphe ingozi, futhi lokhu kungasiza, kodwa ukugcina usayizi wesilinganiso esiphansi ngokulingana ne-akhawunti yakho ibhalansi kuyindlela ehle kakhulu yokuphatha imali. Ungafunda okuningi kulokhu ku Ukuphathwa Money ingxenye.
Indlela yokugwema Imajini Izingcingo & Stop Outs
Thola eziningi futhi Imajini
Imajini Call Broker
Imajini Isetshenziswa Imajini futhi Imajini Mahhala
Ukuhweba kanye Ngaphansi Per Trade Thola ngenkathi uligodlela Ilungelo Lokungayi Thola Ephakeme
Kuyini ucingo wekhasi
Wawuyoba yini engaba ingozi futhi Umvuzo yokukhetha nomdayisi enikeza asizakale ephakeme kunenye